भगवानले बनाएका र मेसिनले बचाइरहेका मिर्गौलाका नाममा …. – Health Post Nepal
२०७६ वैशाख ९ गते ११:१७
संसारमा १० प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै रूपमा मिर्गौैलासम्बन्धी समस्या भएको अनुमान डब्लुएचओको छ । वयष्क जनसंख्याको करिब २० प्रतिशतमा कुनै न कुनै रूपमा मिर्गौलाको समस्या छ । नेपालको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्थित तथ्यांक छैन । यो भन्न सकिन्छ कि मिर्गौला रोगीको संख्या बढेको छ । जनसंख्यासँगै मिर्गौलाको रोरोग बढ्नु स्वाभाविक हो । जनसंख्यामात्रै होइन् सूचनाको स्रोत र स्वास्थ्यप्रतिको सजगता बढेकाले पहिले लुकेर रहने रोग अहिले बाहिर आउँनुले पनि उपचारको दायरामा आउने दर बढिरहेको छ ।
अर्कोतिर, पछिल्ला दिनमा मानिसको जीवनशैलीसँगै खानपान फेरिएको छ । अहिलेको जीवन फास्टफुडजस्तो भएको छ । प्रशोधित खाना छन्, प्रदूषण बढेको छ । सवारीसाधनको मात्रा बढेको छ । शुद्ध वा अग्र्यानिक खाना लोप हुँदै छ । अस्वस्थकर आधुनिक जीवनशैलीले गर्दा मानिस दीर्घरोगको सिकार बन्दै छन् । रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड, कोलेस्टेरोलजस्ता रोगहरू यही समाजको देन हुन् । यिनैका कारण पनि मिर्गौलामा असर परेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको छुट्टै वातावरण छ । उनीहरूको खाना र पानीको ठेगान छैन । दुखाइ कम गर्ने औषधिको प्रयोग ज्यादा हुन्छ । बाहिरी घाममा काम गर्दा पनि असर पर्छ । यस्ता विषयमा अध्ययन हुन जरुरी छ । देशभित्र पनि हामीले खाने पानी कति दूषित छ । हावामा कति प्रदूषण छ । यिनीहरूको प्रभाव अकल्पनीय छ । त्यसैले रोग बढ्नु खासै अस्वाभाविक हैन् । फेरि पनि मेडिसिनले केही न केही प्रगति गरेकै छ ।
माया गर्ने मान्छे कोही छ भने उसलाई भगवान्ले २ वटा दिएर पठाएको छ । २ वटा दिनु भनेको एउटा बाँडेर लिनुपर्छ भन्ने हो । मिर्गौलालाई यस्तो महत्वपूर्ण बनाएर पठाएको छ, तर मानिसले सधैँ पिसाब, फोहोरसँग जोडेर मात्र बुझ्ने गरेका छन् । भगवान्ले त्यतिकै २ वटा मिर्गौला पठाएका होइनन् ।
मिर्गौलाको विशिष्ठता र बिगर्ने अवस्था
सुगर, प्रेसर, कोलेस्टेरोल, रक्तचापले गर्ने असर उमेर ढल्केका मानिसमा धेरै देखिन्छन् । यिनीहरूले मानिसलाई असर गर्न २०–२५ वर्ष लाग्छ । तर, मिर्गौलाका प्राथमिक रोगहरू भने धेरैजसो वयष्कमा नै छन् । जन्मजात हुने विकृति र आमाबुबाबाट आउने समस्या (वंशानुगत) भने बच्चाहरूमा देखिने नै भयो । मिर्गौलाका जटिल रोगहरू भने ३५ देखि ४० वर्षको बीचमै बढी देखिन्छन् । यतिवेला सुगर, ब्लड प्रेसर र क्यान्सरका लक्षण देखिन थाल्छन् ।
वंशानुगतमा पनि पानीको फोकाहरू भरिने, पत्थरी बन्ने रोगहरू छन्, जुन आमाबुबाबाट आउँछन् । क्षार र अम्ल पनि आउँछन्, यसलाई मिर्र्गाैलाले मिलाउने गर्छ । लवणको मात्रा पनि मिर्गौलाले नै मिलाउने हो । यी समस्या वंशानुगत हुन् । जन्मजातै हुने मिर्गौलारोगमा २ वटा हुनुपर्नेमा एउटा मात्र हुने, २ वटा एकै ठाउँमा रहने पनि हुन्छन् । त्यस्तै, नसाहरूको विकास स्वाभाविक रूपमा नहुने, पिसाबथैलीको विकास नहुने, पिसाब तल आउनुपर्नेमा माथि जाने रोगहरू जन्मजात हुन्छन् । यी पनि वंशानुगत नै हुन् ।
डायलाइसिसका पनि कठिनाइ छन् । सबै चिज छन्, तर रोग कसैले लागो हालिदिएर निम्त्याएको होइन । रोग आयो, तर विकल्प पनि त आएको छ नि । माया गर्ने मान्छे कोही छ भने उसलाई भगवान्ले २ वटा दिएर पठाएको छ । २ वटा दिनु भनेको एउटा बाँडेर लिनुपर्छ भन्ने हो । मिर्गौलालाई यस्तो महत्वपूर्ण बनाएर पठाएको छ, तर मानिसले सधैँ पिसाब, फोहोरसँग जोडेर मात्र बुझ्ने गरेका छन् । भगवान्ले त्यतिकै २ वटा मिर्गौला पठाएका होइनन् ।
मुटु एउटा भए हुने, तर मिर्गौला किन २ वटा त ? दिमाग आफैँमा एउटा मात्र हो, तर मिर्गौला किन २ वटा चाहियो त ? मानिसले मिर्गौला विशेषज्ञभन्दा अरू रोगका विशेषज्ञलाई बढी चिन्छन् । डक्टरहरूमा पनि नेफ्रोलोजिस्ट हुनेक्रम कम छ । सबैले पीडा देखेका छन्, फ्याटफ्याटी मर्नेहरूको त पीडै हुँदोरहेनछ । मिर्गौलारोगी बढी पीडा लिएर बाँचेका छन् । सडकमा मादल वा गीत बजाएर बस्नेमा अधिकांश मिर्गौलारोगी नै छन् । अरू रोगी त्यहाँ बसेका खासै देखिँदैनन् । अरू जटिल रोगका बिरामी त मरिसक्छन् ।
मिर्गौलाका लागि अहिले सबैभन्दा राम्रो नेपाल भएको छ । म त अहिले ‘बेस्ट टाइम टु दि नेफ्रोलोजिस्ट, बेस्ट टाइम टु दि किड्नी फर नेपाल’ भनिरहेको छु । मान्छेहरू भन्छन्– मिर्गौलारोग नलागोस् । तर म मिर्गौलाको डाक्टरका रूपमा भन्छु– रोगै नलागोस्, यदि लाग्नु नै छ भने दिमागमा, मुटुमा, फोक्सोमा, कलेजोभन्दा बरु मिर्गौलामा रोग लागोस् ।
उपचार तर्फ नेपालले एक आधारमा भन्दा फड्को नै मारेको छ । आज नेपालमा डायलाइसिस गरेर २७ वर्षसम्म बाँचेका पनि छन् । गुणस्तरमा बहस हुन सक्ला, कमसे कम मानिस बाचेका त छन्, परिवारसँग हाँसेर बसेका छन् । बाथरोगले महिलाहरू १८–२० वर्षमा मर्ने गर्थे । अहिले उपचारबाट गर्भाधान हुनसक्ने समेत बनाइसकेका छौँ । नयाँ बिरामी बढ्नेक्रम चलिरहेको छ । उपचारको माहोल पनि बनेको छ ।
अर्कोतिर हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको अहिले बढेको मिर्गौला मात्र समस्या होइन । अहिले मुटु, नसालगायतका दीर्घरोगी बढेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन भन्न मिल्दैन, पहिलेको तुलनामा आकाश–पातालको फरक आइसकेको छ । अहिले देशमा सयभन्दा बढी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध छ । सरकारले निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । मिर्गौला प्रत्यापरोण देशभित्रै हुन्छ । १२ सयको प्रत्यापरोण भइसकेको छ । प्रत्यारोपण सेवा नियमित छ । यस्तै अरू क्षेत्रमा पनि धेरै प्रगति भएका छन् । निजी अस्पतालको आफ्नो योगदान छ । वीर अस्पतालमा मात्रै १० वटा मेसिनले डायलाइसिस हुन्छ ।
मिर्गौलाका लागि अहिले सबैभन्दा राम्रो नेपाल भएको छ । म त अहिले ‘बेस्ट टाइम टु दि नेफ्रोलोजिस्ट, बेस्ट टाइम टु दि किड्नी फर नेपाल’ भनिरहेको छु । मान्छेहरू भन्छन्– मिर्गौलारोग नलागोस् । तर म मिर्गौलाको डाक्टरका रूपमा भन्छु– रोगै नलागोस्, यदि लाग्नु नै छ भने दिमागमा, मुटुमा, फोक्सोमा, कलेजोभन्दा बरु मिर्गौलामा रोग लागोस् । किनभने, कमसेकम उपचार त छ । भगवान्ले बनाएको मिर्गौला आज मान्छेले बनाएको मेसिनले डायलाइसिस गरेर बचाएको छ ।
अब मिर्गौलारोगको उपचारका लागि विदेश धाउनुपर्ने छैन । देशभित्रै ४–५ वटा अस्पतालमा नियमित प्रत्यारोपण भइरहेका छन् । माया गर्ने मान्छे मात्र हुनुपर्छ अब त, साटासाट गर्न मिल्छ । मरेर जाने मान्छेको मिर्गौला नेपालमा प्रत्यारोपण हुन थालेको छ । औषधिले पनि थुप्रै रोग निको भएका छन् । निको नहुने मिर्गौलारोगमा अब स्वदेशमै प्रत्यारोपण पनि हुन थालेको छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क पनि गरेको छ ।
डा. अनिल बराल